Yini isithombe sobuciko bensimbi
Umdwebo wobuciko wensimbi udlala indima engenakulungiswa ekwakheni isikhala nasekuhlobiseni. Isithonga sensimbi yomhlobiso singafakwa isikhala somphakathi esingaphandle noma izindawo zangaphakathi, futhi singasetshenziswa endaweni yendabuko. Siyazi ukubaza kwensimbi kufaka ezinye izinhlobo ezinjengokubaza insimbi engagqwali, ithusi ...
ngu admin ngo 20-07-06
Umfanekiso oqoshiwe wethusi unesikhathi eside ongagcinwa futhi ugcinwe kangcono ngaphezu kwamakhulu eminyaka. Uma uqhathanisa nezinye izifanekiso ezibaziweyo, isithombe sobhedu naso sinomlando omude, akunjalo? Siyazi ukuthi ukusikwa kwebronze kungenziwa kube ngesibalo, ukwakheka kwezilwane njll., Ngenxa yeminithi nemininingwane ekhethekile idinga ...
Insimbi yeCorten noma i-Weathering insimbi iyinhlobo ekhethekile yochungechunge lwensimbi ephansi phakathi kwensimbi engagqwali nensimbi ejwayelekile yekhabhoni. Inokuphikisana nokugqwala komoya womkhathi kanye nesici sokuhlanganisa ngaphezu kwensimbi ejwayelekile yekhabhoni, futhi intengo inomnotho kakhulu kunensimbi engenasici. Ipuleti lensimbi ye-corten ...